XOG XASAASI: ”Doorashada Jubbaland nabad kuma dhici doonto haddii ay sidaani ku sii socoto..” waxay yiri… | HalQaran.com
XOG XASAASI: ”Doorashada Jubbaland nabad kuma dhici doonto haddii ay sidaani ku sii socoto..” waxay yiri…
Kismaayo (Halqaran.com) – Musharax Sheekh Daahir Axmed Sheekh Cabdullaahi oo ka mid ah musharaxiinta Jubbaland ayaa waxa uu walaac ka muujiyay qaabka Maamulka Jubbaland uu u qaban-qaabinayo Doorashada Madaxtinimada Jubbaland.
Musharax Sheekh Daahir Axmed ayaa sheegay haddii qaabka uu Maamulka Jubbaland wado ay doorashada ku sii socota, aad mooddo inaanay Doorashada Jubbaland nabad ku dhici doonin.
“Xaqiiqo marka la yiraahdo Madaxweynaha hadda joogga qaabka uu wax u wado haddii ku socoto waxaad mooddaa inaanay nabad ku dhaceynin doorashada, marka aan runta kuu sheego, laakiin waxaan ugu baaqaynaa inuu ku soo noqdo cadaaladda, oo uu soo daggo oo doorashada uu keeno meel xalaala oo xor ah, wax mashaakilna aysan doorashada ka dhalan.” Ayuu yiri Musharax Sheekh Daahir Axmed.
Musharaxiinta ku sugan Magaalada Kismaayo oo la soo sheegayo inay ciidan uruursi ka wadaan magaaladaasi, ayuu musharaxan sheegay in musharax kasta ay la jooggaan ilaaladiisii oo keliya, wax ka baxsana aanu jirin.
“Musharax walba ilaaladii la joogay uun baa la joogga, wax hor leh oo ku soo siyaaday ma jiro, wax xiisihii hore ka dhacayna ma jiro.” Ayuu yiri Sheekh Daahir Axmed Sheekh Cabdullaahi oo la hadlay Radio Kulmiye.
Mar uu ka hadlayay waxa ka dhaxeeya musharaxiinta mucaaradka iyo Axmed Madoobe ayuu sheegay inay ka dhaxeyso oo keliya in la qabto doorasho xalaal ah, isna uu doonayo in doorashada uu ku shubto.
“Midowga musharaxiinta iyo Axmed Madoobe wax xiisad hor leh oo dhex taala ma jirto, keliya waxa dhex yaallaa waa doorashada inay u dhacdo hab xalaala oo xor ah, isagana uu doonayo inuu afduubo intaa uun weeye, wax kaloo dhex yaallaa ma jiro.” Ayuu yiri Musharax Sheekh Daahir.
Sheekh Daahir ayaa Dowladda Somaliya iyo Beesha Caalamka ugu baaqay inay si deg deg ahi u soo fara-geliyan Doorashada Jubbaland, isla-markaana ay ka shaqeeyan in nabad ku dhacdo doorashada.
sidaan kuma dhici doonto